Indlu yedolophu epholileyo ngaselwandle - I-Airbnb
Indlu yedolophu epholileyo ngaselwandle
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguHrefna
Inombolo yobhaliso HG-00003497
Indlu yethu eseVík ilikhaya kude nekhaya. Yindawo epholileyo yokubalekela usapho lwethu kwaye sinegumbi labantu aba-4-5. Icwangciswe kakuhle, ishushu kwaye inayo yonke into oyifunayo. Kumanqwanqwa nje ambalwa ukusuka kunxweme oluhle lwaseVík, ekupheleni kwesitrato esikufutshane nesikolo kunye nedama lokuqubha laseVík/indawo yesauna. Kuthe cwaka kakhulu kodwa kukufutshane kuyo yonke into, njengevenkile enkulu kunye neziko labatyeleli kwaye unendalo kwinqanaba lakho. Iimbono ezintle.
Yindlu yedolophu epholileyo kumgama nje ambalwa ukusuka kunxweme oluhle lwaseVik. Kuthe cwaka kakhulu, ngabamelwane abambalwa kwaye akukho traffic ingako kuba isekupheleni kwesitrato. Ikwakufuphi nendawo yokuqubha yaseVík kunye nendawo yesauna kunye nebala lokudlala lesikolo. Sinamagumbi amabini kunye negumbi lokuhlala, ibhedi enye ephindwe kabini kunye nebhedi enye, kodwa kuyenzeka ukuba ufumane ibhedi egotywayo nayo yonke into (umqamelo, iduvet njl.njl.) enokusetyenziswa kwigumbi lokuhlala. Sikwanayo nebhedi yokuhamba xa kukho imfuneko. Ngoko sinendawo yabantu aba-4-5 kunye nebhedi. Indlu inofikelelo olulunge kakhulu ngoko lukhetho olulungileyo kubantu abakhubazekileyo ngokunjalo, iipaseji ezibanzi kunye nomgangatho omnye.
4.82 · Izimvo eziyi-109
Yindawo ezolileyo kakhulu kuba le ndlu ikwisiphelo sesitrato kwaye kukho abamelwane abambalwa. Uva kuphela amaza elunxwemeni ngamaxesha athile. Isikolo kunye ne-kindergarten zikufuphi ukuze abantwana bakwazi ukudlala apho ukuphuma kweeyure zesikolo. Zonke iifestile zineembono ezintle kwaye zisondele kakhulu kuyo yonke into.
Umbuki zindwendwe ngu- Hrefna
In short, I'm a family woman living in Hafnarfjörður, working in Reykjavík but from the south of Iceland. I'm educated in International Relations, Teaching and Psychology and I love to travel.
Ukuba ufuna naluphi na uncedo unganditsalela kwiseli yam: +(INOMBOLO YEFONI EFIHLEKILEYO) okanye iseli yabayeni bam: +(INOMBOLO YOMnxeba EFIhliwe). Abazali bam bahlala kufutshane yaye badla ngokundinceda xa kuyimfuneko.
Inombolo yomthetho: HG-00003497
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1057
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vík